Shiinaha OEM otomaatiga qalin qalin qumman Macdanta Dabiiciga Raadinta 3 midab qalin qalin leh warshad burush iyo soosaarayaasha | Jinfuya
OEM otomaatiga qalin qalin qumman Macdanta Dabiiciga ah Raadinta 3 qalin midab qalin leh burush
Maxaan ugu Baahanahay qalin suni
Baaruhu waa aag timo gaagaaban oo ka sarreeya isha oo raacaya qaabka cirifka hoose ee geesaha naaska xayawaannada qaarkood. Shaqadooda ugu weyn waa inay ka hortagaan dhididka, biyaha, iyo qashinka kale inay ku dhacaan godka isha, laakiin sidoo kale waxay muhiim u yihiin xiriirka aadanaha iyo muujinta wajiga. Waa wax iska caadi ah dadku inay wax ka beddelaan sunnayaasha iyagoo adeegsanaya timo saarid iyo qurxin.
Waxaad ubaahantahay qalin hadii aad rabto inaad suniyahaaga ka dhigto mid dhalaalaya, buuxi meelaha banaan ee timaha u dhexeeya ama sax qaabkooda. Hooska ayaa siin doona mugga sunnayaasha. Laakiin si aad udajiso timaha xun xun, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho jel dheeri ah. Haddii sunniyahaagu si dabiici ah u leeyihiin qaab qumman, si fudud u isticmaal qalin ama hooska indhaha.
Shayga MAYA 4030-1
Midab Bunni, madow, dhexdhexaad bunni
Ku habboon Nooca maqaarka oo dhan, fadlan u dhigma midabka timahaaga si aad u go'aansato midabka qalin suniyaha aad doorato.
Macluumaadka saafiga ah 1g
Shaqaynta Qurxinta Qurxinta eyebrowga
Waan Balan Qaaday vegan iyo 100% CRUELTY-FREE
BIYAHA - Ma fududa in la libdho, aan biyuhu istaagin, dhidid-caddayn, caddayn qiijin muddo dheer.
SAHAL IN LAGU CODSADO - Madaxa afar gees fargeeto gaar ah, sawiro wareegga suniyaha oo ku sii wad midabka gudaha si siman oo ay la socoto boodhka-qaabka aad u sawireyso tallaabada ugu dambeysa ee loogu talagalay abuurista sunnayaasha muuqaalka iyo dabiiciga ah.
KHUDBAD-CADDAYN - Waa fududahay in lagu sawiro dareen suugaan oo siman oo qani ku ah qanjirrada, cadeyn aan yareynin, sii suniyahaaga u ekaanshaha muuqaal maalinta oo dhan.
ISTICMAALKA - Ku wanaaji sunniyahaaga adoo buuxinaya meelaha banaan si aad u abuurto muuqaalka dabiiciga, sunnayaasha la buuxiyey ee loogu talagalay daalacashada si fiican loo qeexay.
Muddo dheer - Qaaciddada muddada dheer socotaa waxay xaqiijineysaa in qurxintaadu ay socon doonto maalinta oo dhan adigoon qiijin ama ka yaraanin dhididka, roobka, iyo xitaa cayaaraha biyaha.
Kuweena Qalab Baarkinka Toos ah burush ayaa loo sameeyay si ay kaaga caawiso abuuritaanka sunnayaasha cillad la'aanta iyo dabiiciga u eg.
Naqshadeynta dib-u-buuxinta qaaska ah ee loo qaabeeyey waxay gacan ka geysaneysaa sidii si fudud loogu sawiri lahaa khadadka ku yaal bogaggaaga, Dareenku waa hagaagsan yahay iyada oo aan la karin, dabiici ahaan way isu yimaadaan si ay u sameeyaan suni qurux badan oo si fiican u qaabeeya wejigaaga muuqaal kasta oo qurxiyo ah.
Baarayaasha sunnayaasha waxay u eegi doonaan si buuxda, sifiican oo qeexan.
Way fududahay in la dalbado, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon bilowga iyo xirfadlayaal isku mid ah. Qalinka sunnaha ayaa si siman u duulaya isagoo bixinaya midab qurux badan oo soconaya maalinta oo dhan.
#Ma jiro wax qiiqaya / #Ma sii idlaanayso / #Easy si aad u dalbato / # Si fudud loo saaro
# Biyo-mareen / # Waaritaan Dheer / # Muuqaal Dabiici ah
Sida Loo Isticmaalo Toos Qalin suni si loo diyaariyo qaab baal sun ah?
Qalinkeenna sunnaha baarkoodu waa mid aan biyuhu caddayn karin oo dhididsan, laakiin waa mid khafiif ah oo aad si fudud ugu saari kartid qalabka wax lagu nadiifiyo ee wax lagu qurxiyo ama biyaha wax lagu qurxiyo.
Hore: Aasaaska Liquid Jumlada 8 midab oo miisaankeedu yahay 30ml oo leh kareem dabiici ah oo dabiici ah iyo Foormulada qoyaanka
Xiga: Calaamadaha Gaarka ah ee eyebrow Waxyeele Waxsoosaar dabiici ah brow Kobaca nafaqada ee dareeraha dareeraha
Qalab Baarkinka Toos ah